Indawo yokufika: Yeyokwenene, emaphandleni, eDolophini
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguChristy
Chitha ubusuku, impelaveki okanye iveki kwidolophu entle yeCouncil Grove. Ifakwe kwiSakhiwo seBhanki yoMbuso esandula ukubuyiselwa, i-Landing ibonelela ngekhaya elikude nekhaya elingamanyathelo nje ukusuka kwi-Hays House Restaurant (1857), i-Neosho River Walk, kunye ne-BG's Bar kunye ne-Grill - kunye nemizuzu nje ukusuka kwezinye iindawo ezinomtsalane zembali nezendalo, kuquka iFlint Hills Nature Trail kunye neTallgrass Prairie National Preserve. Uya kuzithanda iindawo zokuhlala ezitofotofo kunye namava okwenyani asemaphandleni.
Yonwabela isimilo sale gem ye1880s nazo zonke izinto eziluncedo kwiNkulungwane yama-21! Uya kufumana igumbi lokuhlala elinombono ovulekileyo kunye nemigangatho yokhuni oluqinileyo, indawo yokuhlala kunye nedesika; ikhitshi elungiselelwe kakuhle kunye neekhabhinethi zecherry, izixhobo zakudala, i-coffeemaker, i-dishwasher, ifriji, kunye neziseko zokupheka; igumbi lokuhlambela labucala elinethayile zakudala kunye neshawari enamagumbi; igumbi leendwendwe; kunye negumbi lokulala eliphangaleleyo labucala elinebhedi elingana nokumkanikazi, kunye nokuchukumisa zakudala.
Singaphakathi komgama wokuhamba weBG's Bar kunye neGrill (ngaphaya kwesitrato), Watts Coffee Co. (1/2 ibhloko ukuya empuma), Hays House (1/2 block ukuya empuma), Art galleries, zakudala, kunye Riverwalk . Sizibhloko nje ezimbalwa kwiDairy Queen kunye neTrail Days Cafe. Ukuba uthandana noBomi beFlint Hills, siyavuya ukuthetha nawe ukuba uhambe apha kwaye sikuncede ufumane indawo esisigxina!
Sihlala kwaye siyayithanda iFlint Hills. Ndiyavuya ukusebenzisana kancinci okanye kakhulu njengoko uthanda. I-Smart-lock yokufikelela kwiindwendwe nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku. Ngokuxhomekeke kwixesha, sinokudibana nawe xa ufika. Sikwavuyiswa kukwabelana nabanye ngeenkcukacha malunga noluntu kwaye siphendule imibuzo nangaliphi na ixesha ngeapp ka-Airbnb. Ukuba uthatha isigqibo sokufudukela apha, singakunceda naloo nto!
Sihlala kwaye siyayithanda iFlint Hills. Ndiyavuya ukusebenzisana kancinci okanye kakhulu njengoko uthanda. I-Smart-lock yokufikelela kwiindwendwe nangaliphi na ixesha emini okanye…